Waa hagaag, in aannu nolol aan lahayn waayo-aragnimo dhan wareejinta faylasha ka PC si iPhone iyo qeybsanaan. Marar badan, waxaan u baahan nahay si ay u fuliyaan files noo muhiim ah ka iPhone iyo seenyada sida, ku wareejinta faylasha ka PC si iPhone yimaado si ay u isticmaalaan. Waxaa jira siyaabo kala duwan si ay u gudbiyaan files ka PC si iPhone. Waxaan qaataan karaa habka wareejinta faylasha ka PC si iPhone iyada oo Wi-Fi, ama iyada oo loo marayo Lugood ama xitaa iyada oo drive google. Kuwaas Saddexda hababka kala iibsiga ee files yihiin waxtar u leh suuqa kala iibsiga saxda ah ee files.
Bedelka files ka PC si iPhone isticmaalaya Lugood
Si fudud files ka PC wareejiyo iPhone aan Lugood
Lugood kale oo
Jidka si ay u gudbiyaan files ka PC si iPhone isticmaalaya Lugood
Lugood waa mid ka mid ah ugu yaab leh oo waa-leeyihiin barnaamijyadooda qalabka macruufka. Waxaad isticmaali kartaa Lugood ujeeddo ah kala iibsiga ee files ka PC si iPhone. Tallaabooyinka u kala iibsiga ee files ka pc in iphone isticmaalaya Lugood yihiin sida siiyo hoos ku qoran:
• Isku aad iPod taabto, iPhone, iPad ama si aad u computer iyo qalab la xusho in la isticmaalo.
• Markaas Riix Apps
• Hadda kaliya fiirin Hoos File Sharing, Dooro app ah ka mid ah liiska iyo Click Add
• In uu furmo suuqa muuqata, dooro file ah si ay u gudbiyaan, oo guji Open
Halkan waxa aad ka waxaa lagu sameeyey!
Hordhac ah Wondershare TunesGo Retro
Wondershare TunesGo Retro waa mid ka mid ah software ugu yaab leh ujeeddo ah kala iibsiga ee songs, videos ka qalabka si ay PC iyo qeybsanaan. The barnaamijyadooda cajiib ah, oo ay maamushaa labada daaqadaha iyo Mac, si buuxda u la jaan qaada Lugood 12.1, macruufka 9, iyo taageero iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus.
Faa'iidada Wondershare TunesGo Retro u Mac waa:
• Tayada Original
• Safe, ma network daruurta
• iibsiga Dufcaddii, badbaadiyo waqtiga
• Collection Share & Maamul Music iyada oo aan xayiraado Lugood
• Si toos ah dayactir iyo Fcaility ah ayna of Song Information
• Maaraynta iyo Transfer Photos, Messages, Xiriirada & Files
Talaabooyinka si ay u gudbiyaan files ka pc in iphone la wondershare TunesGo Retro
Iibsiga ee files ka pc in iphone la wondershare TunesGo Retro la raaco karaa siyaabahan soo socda:
guji Media khaanadda bidix
Markaas guji music, video, iwm sida la doonayo
Riix-xagalka ah taas oo u muuqata hoos Button Add
Markaas guji Add File ama ku darto folder
Hadda waxaad dooran kartaa in ay dajiyaan files ka PC qalabka.
Waxaa jira in la dooran karo Lugood oo ah qaab Musicbee, Fidelia, Ecoute, MediaMonkey iyo Foobar 2000. Qaar ka mid ah sida soo socota:
Musicbee waa mid ka mid ah fursad kale oo fiican in Lugood. App gabi ahaanba waa mid lacag la'aan ah, wuxuuna ka shaqeeyaa Windows.
Muuqaaladan weyn ee Chine ee:
• Si toos ah u eegay oo waxaan ku tusi lyrics oo u badbaadin doonaa in aad heeso
• CD Rip oo music u hagaagsan in iPod, iPhone, iPad, iyo qalab kale oo badan
• Xarunta ka mid ah maktabadaha Keenista ka Lugood Library iyo Windows Media Player
• Taageerada qaabab music caan ah oo diinta ka dhexeeya qaababka kala duwan
• Customization ee Auto DJ Sharuucda si ay dad safka Now Playing
• Samee playlists smart iyo radio-style oo leh xeerar dhowr iyo fursadaha
Fidelia ka shaqeeya ee X Mac OS 10.7 ama ka dib. A kale oo weyn oo ay ku Lugood, laakiin dhib ah in app uusan soo xor ah oo kharash dhan $19.99.
Muuqaaladan ugu weyn waa sida soo socota:
• Xarunta of music Import ka Lugood Library
• U bandhigidda-aaminnimo sare dhawaaqa, waayo, kuwii ku jeclaa oo casri ah music
• Taageer tiro balaadhan oo ah qaabab audio, sida FLAC iyo kuwo kale oo badan
• tags track Display, farshaxanka, heerarka rikoodh, iyo waveforms audio
• Beddelaan files audio in qaabab ka jeeclaadeen marka loo dhoofiyo maktabadda
Wixii Mac OS X 10.6 ama ka dib, Ecoute waa mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu quman. Ecoute waa app oo lacag la'aan ah, taas oo uu leeyahay faa'iidooyin fara badan.
• Ku darista ama dayactir ah ee farshaxanka iyo tags kale waa la heli karaa
• Maaraynta maktabadaha music iyo video aan bogging hoos
• nidaameed la Lugood si aad u cusboonaysiiso metadata si toos ah
• widget customizable kuu ogolaanaysaa inaad qaadato xakameeyo ama music si fudud
• music Import, filimada, iyo Podcasts ka Lugood Library
• Xarunta xiriir ula Last.fm, Twitter, Facebook iyo si aad u hesho heeso badan
MediaMonkey yimaado sida il weyn ay badal u tahay Lugood iyo yimaado oo lacag la'aan ah.
Muuqaaladan weyn ee MediaMonkey waa:
• Maaree maktabadda filim, music ka 100 ilaa 100,000 oo maqal ah iyo video files iyo playlists
• Si toos ah loo aqoonsado filimada iyo kuwan raadkaygay in la la'yahay macluumaad, kuwaas oo tags aan beehsa, ama in ay yihiin labalaabka meelo kale
• Si toos ah u samayn kartaa abaabulka iyo ka bedelayaan ee files music video ama ku wadid aad u adag galay madaxda macquul ah
• Xarunta ka mid ah Abuuridda Playlists fudayd.
• Xarunta inay kaliya jiidi oo hoos u Gurtida in ay isku daraan mp3s iyo videos ka Library, la abuuro Auto Playlists ku salaysan shuruudaha fudud search
• Isticmaal Monitor File in ay si toos ah u cusbooneysiin maktabadda music video ama ururinta si ay u muujiyaan wixii isbeddel ku wadid aad u adag ama network
Foobar 2000 waa madal daaqadaha ka taageeraya barnaamijyadooda, kaas oo ka yimaadaa oo lacag la'aan ah oo ah qiimaha.
Muuqaaladan weyn ee Foobar 2000 waa:
• U ogolow dadka isticmaala ku darto ama cusboonaynta farshaxanka iyo tags kale
• Work leh qaybaha dhinac saddexaad in la kordhiyo awoodda
• files audio Support in ku dhawaad ​​qaab kasta, sida MP3, WMA, iwm
• U bandhigidda tuuryo keyword customizable iyo qaabka user interface
• waad dooxi doontaa CD-yada iyo badalo qaabab audio leh qayb loogu badalo
A weyn on kuwaas oo kale Lugood waxaa laga heli karaa http://www.wondershare.com/itunes/free-alternatives-to-itunes.html . Waxaa maqaalkan fasiraad dhan calaamado muhiim ah oo ku kala duwan Lugood. Wondershare, Sidoo kale, waxay bixisaa kala duwan habab dhowr ah. Wondershare Bixisaa barnaamijyadooda 'Wondershare TunesGo Retro' si loo siiyo xarunta dhowr users adduunka oo dhan. Adeegyada sida Transfer ee files ka iPhone in PC iyo mid ka mid ah qalab si kale, kaliya waa mid ka mid ah qaababka dhowr ah barnaamijyadooda ku dhex wondershare.
Wondershare TunesGo Retro waxaa laga heli karaa labada Windows iyo Mac. Iyadoo muuqaalada dhowr ah oo TunesGo Wondershare ka Retro, taasi waxay u adeegtaa sida ciyaaryahan cajiib ah si ay dadka, raadinayso mid xal stop adeegyada kala duwan ee la xiriira iPhone iyo kuwa kale. Waa Apple Qalabka tababaraha ugu fiican, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si ay u gudbiyaan iDevices 'playlists, songs, videos, Lugood U, Podcasts in Lugood / PC, iyo qeybsanaan ku xigeenka
> Resource > iPhone > 2 siyaabaha ay u gudbiyaan files ka PC si iPhone